ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “လှေကလေးကို လှော်မည်”
တကယ်တော့လဲ လူတွေဆိုတာ သံသရာမြစ်ကြီးထဲ မရပ်မနား လှော်ခတ်သွားနေရတဲ့လှေသမားတွေပါဘဲ..။လက်ပန်းကျသူတွေ..ရေသာခိုချင်သူတွေ..ကိုယ့်ခံစားချက်တခုထဲကိုဘဲကွက်ကွက်ကလေးမြင်တတ်တဲ့ တကိုယ်ကောင်းဆန်သူတွေ...အများပျော်ဖို့ကိုယ့်အပျော်တွေကိုရင်းပေးခဲ့ရသူတွေ...
အများဘဝတွေအတွက်ကိုယ့်ဘဝကိုပေးဆပ်ရင်း လူမသိသူမသိ စုန်းစုန်းမြုပ်သွားခဲ့ရသူတွေ....ဒီသံသရာမြစ်ထဲ မရေမတွက်နိုင်အောင်ပါဘဲ..။
ကိုပေါ… ဖတ်ပြီး ကျွန်မ မျက်ရည်ကျမိတယ်… ငိုချင်ရဲ့လက်တို့ မို့ငိုမိတယ်…
ကိုပေါလို လှေလှော်တာမျိုးနဲ့ခပ်ဆင်ဆင် အာသီသတခုခုဖြစ်လာတဲ့အခါ… အစားထိုးစရာတခုခုကို စိတ်သက်သာအောင် အပြေးအလွှားရှာ…ဝေဒနာ သက်သာလိုငြား…
အချည်းနီးပါ… ဒီမှာ မုန်းချောင်းမရှိဘူး… ဒီမှာ ဧရာဝတီမရှိဘူး… ဒီမှာ…….မရှိဘူး….
အင်း… တနေ့ ကျရင်တော့….
လောလောဆယ်တော့ RC speedboat လေးပဲ အာသာပြေသွားဆော့နေလှည့်။
ရေတွေ အများကြီး ရှိတဲ့နေရာကို ကြိုက်တယ်။ အခုတော့ အာသာပြေအောင် နီးနီးနားနား ဆိုလို့ မြစ်လို့ခေါ်တဲ့ မြောင်းနံဘေးပဲ သွားသွားထိုင်နေရတော့တယ်။
နောက်တယ်ထင်လို့၊ အတည်ကြီးပြောနေတာကိုး။ ကိုပေါရေ၊ ဖြူစွတ်စွတ် မဒမ်ပေါကိုတော့ မည်းသွားအောင်မလုပ်ပါနဲ့။ :P
အိမ်နဲ့နီးတဲ့ Jurong Lake Park နားမှာပဲ အလွမ်းပြေ ရေပြင်သွားကြည့်ရုံကလွဲ ကျန်တာတော့ လေးထောင့်ပုံ တိုက်တွေချည်းပါပဲလေ ။
ဒီ မှာ ရှိ တဲ့ Pigeon Home လေး တွေ ထဲ က ထွက် နိုင် အောင် ကြိုး စားပြီး ဘေးမသန်းဘဲ အေးချမ်း တဲ့ နေရာ မှာ ငါ့ လှေ ငါ ထိုး ဘယ် ရောက် ရောက် လှော် နိုင် ချင် ပါ တယ်, ကို ကို ပေါ ရေ :o)) >:D<
Do you have the song "Sanda Kein Na Yee" by Mar Mar Aye in mp3 format?
If so, can you pls share it with me?
Dear Ko Myo,
I don't have that song sung by Mar Mar Aye.
But you can visit the following link to download the original version sung by Ma Hla Shwe. There arealot of other myanmar oldies too.
With best regards,Ko Paw
ကျမကတော့ ကိုယ်တိုင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဆက်.. ပီးတော့ သံလွင်ကို ချစ်လို့ သံလွင်နဘေးရွာကလေးက လယ်သမားကိုတောင် လက်ထပ်ခဲ့။ တကယ်က ကျမ လယ်သူမလုပ်ချင်တာ။ ခြံစိုက်ချင်တာ။ ဒါပေမဲ့ ဒိုင်သွင်းရမှာနဲ့ စက်သုံးဆီမလောက်တာနဲ့.. ကျမ လယ်လုပ်တာ ရွှေထွက်ပါရော။ လယ်ထဲက ရွှေထွက်တာမဟုတ်။ စုထားတဲ့ ရှိသမျှရွှေ ထွက်သွားတာ။ ခု ကိုပေါစာဖတ်ရတော့ ကျမတို့ ပစ်ထားခဲ့ရတဲ့လယ်လေး ပြန်လုပ်ချင်စိတ်နဲ့ လွမ်းလိုက်တာ။ ဘယ်တော့လဲ............
I have managed to listen Ma Hla Shwe version.
But, I prefer Mar Mar Aye version.
Other Burmese Oldies in this link are exquisite.
လှေလာစီးကြတဲ့သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်က အခု ခတ်ကွင်းပြင်နေတုန်းဆိုတော့ ရွာသစ်ကြီးကို ရောက်ကာနီးပါပြီ။